di Davide Sabbatini - Jenụwarị 15, 2022
Thenchegbu na ịda mbà n'obi bụ nsogbu a na-enwekarị n'ụwa. Na ,tali, dị ka data Istat si kwuo, a na-eme atụmatụ na 7% nke ndị bi na afọ 14 (nde mmadụ 3,7) nwere nsogbu nchekasị na-akpata na 2018. Ọnụ ọgụgụ nke toro n'ime afọ ndị a kara aka na-abawanye. Nchegbu na ịda mbà n'obi na-ejikọtakarị. Gịnị ka Ndị Kraịst kwesịrị ịma?
1. Mara na nke a bụ ihe nkịtị
Ị gaghị enwe mmetụta 'iche' ma ọ bụrụ na ị na-enwe nchekasị ma ọ bụ ịda mbà n'obi, dị ka anyị kwuru ná mmalite, ọtụtụ ndị na-ata ahụhụ site na ya ma ị dịghị iche. Nchegbu nke ndụ bụ ihe na-emetụta mmadụ niile, ha na-emetụta onye ọ bụla ma ị nwere ike ihu ha na Chineke onye na-agwa gị: 'Atụla egwu'. Ọtụtụ ndị dike nke Akwụkwọ Nsọ tara ahụhụ site na ya (Jona, Jeremaịa, Mozis, Ịlaịja). Ihe na-echegbu bụ ma ọ bụrụ na ịnọ na steeti a. Ọ bụrụ na nke a emee, gwa dọkịta gị, pastọ, ma ọ bụ onye ndụmọdụ Ndị Kraịst.
2. Abalị gbara ọchịchịrị nke mkpụrụ obi
Onye ọ bụla nwere "abalị gbara ọchịchịrị nke mkpụrụ obi". Nke a bụ ihe nkịtị ma na-agafekarị ka oge na-aga. Mgbe anyị na-agụ ngọzi anyị, anyị nwere ike ịpụ na ịda mbà n'obi a. Nke a bụ echiche. Depụta ihe niile ịchọrọ iji nwee ekele maka: ụlọ, ọrụ, ezinụlọ, nnwere onwe okpukpe, wdg. Kelee Chineke maka ihe a niile n'ekpere. O siri ike inwe nkụda mmụọ mgbe ị na-enye Chineke ekele, tinye ihe n'ọnọdụ ziri ezi. Ihe nwere ike ịka njọ, na ịda mbà n'obi abụghị naanị gị. Ọtụtụ n’ime ndị nkwusa kasị ukwuu atawo ahụhụ, dị ka Charles Spurgeon na Martin Luther. Nsogbu na-ebilite mgbe ị na-apụghị na ịda mbà n'obi gị. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịkwụsị ịda mbà n'obi, nweta enyemaka. Kwere na Chineke, kpee ekpere ma gụọ akwụkwọ nsọ gị. Nke a na-aga n'ụzọ dị ukwuu n'iwebata gị n'ìhè pụọ n'abalị gbara ọchịchịrị nke mkpụrụ obi.
3. Ọtụtụ mmasị banyere ihe ọ bụla
Adrian Rogers na-ekwubu na 85% nke ihe anyị na-echegbu onwe anyị anaghị eme eme, nke 15% anyị enweghị ike ime ihe ọ bụla. Mgbe ọ nweghị ihe anyị ga-eme ka anyị gbanwee ihe ndị ahụ, nyenụ Chineke nchegbu, Chineke nwere ubu sara mbara karịa anyị. Ọ na-ahụ ọgụ anyị na-alụ. Ọzọkwa, nchegbu na-egosi na anyị atụkwasịghị Chineke obi na ihe nile ga-arụ ọrụ maka ọdịmma anyị (Ndị Rom 8,18:8,28) Ọzọkwa, anyị aghaghị ịdị ndụ na-eche banyere ọgwụgwụ na ebube nke ga-abịa na nke a ga-ekpughe n'ime anyị (Rom XNUMX: XNUMX). XNUMX:XNUMX ).